Korea Atsimo: Moines Tratra Niloka, Nigoka Ary Nifoka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Mey 2012 2:22 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Български, বাংলা, Italiano, srpski, македонски, Español, English
Tao Korea Atsimo, mpitarika enina avy amin'ny holafitry ny Bodista goavana indrindra ao amin'ny firenena no tratra nilalao Poker niaraka taminà tontona avo dia avo, no sady nisotro sy nifoka ihany koa. Ilay tranga dia niparitaka tamin'ny alàlan'ny lahatsary iray nivoaka an-tsokosoko, nampiseho ireto ‘moines’ mitàna toerana ambony ireto niloka tao aminà hotely mihaja lehibe iray manamorona ny renirano, andro vitsy monja nialoha ny fety fankalazan'ny iray firenena ny nahaterahan'i Buddha.
Ny tontona nilokàn'ireto ‘moines’ ireto dia voalaza fa nihoatra ny 875.000 dolara Amerikana (10 tapitrisa Won Koreana) ary nitohy nandritra ny alina manontolo, naharitra 13 ora ilay filokàna. Any Korea Atsimo, voararan'ny lalàna ny filokana ivelan'ireo ‘casinos’ nahazo fanomezan-dàlana sy ireo toeram-panaovana hazakaza-tsoavaly ka ny fihetsika toy izao avy aminà mpitarika fivavahana dia faran'izay maharatsy endrika indrindra – tsy mampino. Nanondraka ny habaka aterineto Korena Tatsimo ireo fanehoan-kevitra feno eso mandratra, ireo kiana mahery vaika sy rikoriko noho ilay fahalovan'ny finoana.
@uxost01, mpampiasa Twitter, nibitsika hoe [ko]:
Tohina mafy ny reniko ary nivalaketraka tamin'ilay vaovao nikasika ireo ‘moines’ avy ao Jogye niloka volabe am-polony tapitrisa maro amin'ny vola Won Koreana.
@Arirang5886, mpampiasa Twitter, dia nanipika [ko] fa ny vola nentin'ireo ‘moines’ niloka dia ireo fanomezana rakitra ara-pinoana nataon'ny mpino:
Mpiandraikitra mitantana ny holafitry ny ‘moines’ ao Jogye miloka, migoka ary mifoka – ireny fihetsika ireny dia mampiseho fa na ny tenan-dry zareo aza tsy ananany intsony ny fahafahana mifehy azy. Raha tonga tsy tapaka any an-tempoly ire mpino mpanara-dia mba hanolotra izay azony tamin'ny asa mafy narahan-dinitra sy rà, ireto ‘moines’ kosa mampiasa izany vola izany ho ‘fikatsahana ny marina’ mampitaintaina. Tranga iray alaina ho ohatra ity, izay milaza fa ny tena Buddha marina dia ao am-pon'ny mpino mpanara-dia tsirairay avy, fa tsy ao an-tempoly akory.
Mpampiasa Twitter iray hafa, @Nabiwahighhill, no nampitaha ireto ‘moines’ ireto [ko] amin'ireo olo-be mpanao kolikoly :
Tamin'ny 2007, ny ‘Moine’ Myung-ji dia nilaza ampahibemaso fa manana fidiram-bola manodidina ny folo lavitrisa Won ny tempoly (manodidina ny 8.75 tapitrisa dolara amerikana) ary nilaza fa ilainy ny manasaraka ny ‘fikatsahana ny marina’ amin'ny resaka fitantanam-bola. Ny filokàna nataon'ny holafitry ny ‘moines’ ao Jogye nandritry ny alina dia mampiseho fa ny vondrom-piarahamonin'ny Bodista Koreana Tatsimo dia tratry ny fahalovana/kolikoly. Ireo mpitarika ara-pinoana, politisiana sy tomponà fampahalalam-baovao no nanjary lasa ho ireo olobe mpanao kolikoly, ireo 2 isanjato sangany tamin'ny “fitondrana teo aloha”.
Sarin'ireo 'moines' nidina handeha hamonjy ny efitranony taorian'ny vavaka isan-kariva tao amin'ny tempolin'i Haeinsa izay iray amin'ireo tempoly Bodista Chogye tena malaza any Korea Atsimo (tsy voatery hisy ifandraisany amin'ny resaka filokana voalaza ato anaty lahatsoratra) Sary: joonghijung, Creative Commons License (CC BY 2.0)
Ny holafitra ao Jogye dia manana mpanara-dia maherin'ny 10 tapitrisa izay ivondronan'ny ampahadimin'ny vahoaka Koreana Tatsimo eo ho eo. Ny mpitarika ity holafitra Jogye ity dia nanao fialantsiny imasom-bahoaka avy hatrany taorian'ny nahalasa an'ilay tranganà filokàna ho lohateny lehibe nanerana ny firenena, ary nivoady ny hanao “fieken-keloka fanonerana”. Na nisy aza ny fanamboamboaran'ireo mpampahalala vaovao [ko] hoe tetika matipaikan'ireo hery mpifanandrina avy ao anatin'ilay holafitra ihany iny lahatsary nivoaka an-tsokosoko iny, tsy misy antony sy fialan-tsiny matanjaka ampy sy sahaza hampitony ny hadisoam-panantenan'ny vahoaka Koreana
Park Tae-su (@sjts200) nibitsika hoe [ko]:
Tokony handray ny andraikitra manontolo momba iny hadalàna filokàna iny ny ‘moine’ Ja-seong ary hametra-pialàna. Dia tena mihevitra ve ianao fa ho voasasan'izay fieken-keloka fanonerana any ny zava-nitranga? Tsia kosa e.
Yun Hee-sung (@yunheesung) nibitsika hoe [ko]:
Tsapanao hoe tsy mitombina ve ireny (fiampangàna ireny) raha avy aminà ady fahefana ao anatiny ihany no niteraka ilay tantara ratsinà filokàna? Na misy ady fahefana na tsia ao aminao, ny manahirana ny vahoaka Koreana dia ny hoe azo ekena sa tsia ny hilokàn'ireo ‘moines’ volabe tsy hita noanoa sy hifoka ary higoka. Tsy mbola hitanao foana ve ny tena olana marina eto e?
Efa zatra ny toerana naha-firenena tena mpandàla ny finoana azy i Korea Atsimo saingy, satria betsaka loatra ireo tantara ratsy niseho masoandro, na izany avy amin'ny vondrom-piarahamonina Kristiana na ny Bodista [ko], sahiran-tsaina, ka maro dia maro amin'ireo Koreana no manome lamosina ny fivavahana ankehitriny. @tinypencil, mpampiasa Twitter, dia nibitsika hoe [ko]:
Oadray, dia nanapa-kevitra ny hifampizara ny kiana mivaivay amin'ny vondrom-piarahamonina Kristianina ve ny Bodisma? Ny toe-pon'ny olona dia nitodika kokoa tamin'ny Bodisma. Saingy izao dia narodan'ity filokàna tsy ara-dalàna nataon'ny ‘moines’ ity izany.
ary nampiany hoe [ko]:
Ireo ‘moines’ avy amin'ny holafitra Jogye dia niloka nandritra ny alina. Ny fivavahana ve no hanasitrana izao tontolo izao SA izao tontolo izao no hamoky ireny olona ireny izay mialokaloka ao ambadiky ny anaram-pinoana?